DF oo ka hadashay go’aankii Puntland ee shirka wada-tashiga | KEYDMEDIA ONLINE
DF oo ka hadashay go’aankii Puntland ee shirka wada-tashiga
Dowladda uu muddo xileedkeedii sharciga ahaa dhaamaday ee Farmaajo hoggaamiyo ayaa ka hadashay warka ka soo cusboonaaday goobta uu ka dhacayo shirka wada-tashiga.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dubbe ayaa ka hadlay go’aankii maamulka Puntland ee ku aaddana shirkii uu Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo sheegay inuu 15 Febaraayo uu ka dhacayo Garowe.
Maamul Goboleedka Puntland ayaa is ka riixay in Garowe marti galineyso shirka wada-tashiga, iyagoo ku andacooday in aan laga tashan go’aanka ka soo baxay Farmaajo, isla markaana uu dhamaaday waqtigii sharciga ahaa ee xil heynta hay’adaha dowladda.
Cismaan Dubbe oo warbaahinta ka soo muqday ayaa sheegay in ay soo baxayaaan warar yasan fileyn oo ku aaddan in la badllo magaalada uu shirku ka dhacayo, hayeeshee Madaxda Dowladda ayuu sheegay in ay ka go’antahay in isku imaatku ka dhaco Garowe.
Wasiirka Warfaafinta oo u muuqaday inuu masuuliyadda fashilka qabashada doorashada ka wareejinayo Maamulka Farmaajo ayaa Madaxda Maamul Goboleedyada ku eedeeyay in ay ka cag-jiidayaan qabashada shirka, wuxuuna dusha ka saaray dib u dhaca ku yimid doorasho xilligeedi ku dhacda.
Maamullada Puntland iyo Jubbaland, Midowga Musharaxiinta iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare aya isku raacay soona jeediyay in shirka wada-tashigu uu ka dhaco Muqdisho.